सफलताका लागि मेहेनत | प्रेरक संसार
सफलताका लागि मेहेनत
स्वेट मार्डन सायरस फिल्ड सोह्र वर्षको उमेरमा ८ डलर बोकेर शहर छिरेका थिए । उनले त्यो स्थानसम्म आउन निकै ठूलो मेहेनत गर्नुपरेको थियो । यस...
सायरस फिल्ड सोह्र वर्षको उमेरमा ८ डलर बोकेर शहर छिरेका थिए । उनले त्यो स्थानसम्म आउन निकै ठूलो मेहेनत गर्नुपरेको थियो । यस्तै डेल कार्नेगीले ३ डलरबाट व्यावसाय सुरू गरेका थिए । गोल्डस्मिथको विचारमा परिश्रमले लेखिएको दुइ पंक्ति पनि दिनभरीको राम्रो काम हो । भनिन्छ ब्रायण्टले Thanatopsis रचनाकालगि सय पटक लेखेका थिए । अलेक्जेण्डर ह्यामिल्टनको भनाइ छ, 'कोही मानिस मेरो सफलताको श्रेय मेरो बुद्धिमत्तालाई दिन्छन् । मलाई त यत्ती मात्र थाहा छ कि सबै बुद्धिमत्ता मेरा सबैप्रकारको कठिन मेहेनतको दोश्रो नाम हो ।' थोमस एडिसन भन्दथे 'मलाई सफलतामा भन्दा ज्यादा मेहेनतको चरणमै आनन्द आउथ्यो ।'
कथाहरूमा वर्षण गरिएको जादुँको त्यो छडी नै सफलता हो । मेहेनतको अर्को नाम नै जिवन हो । मेरो नजरमा त्यो कुशल युवक अत्यन्त तुच्छ छ जो अरू मानिसले देख्छन् भनेर कुनै पनि काम गर्न हिच्किचाउछ । आलस्य सफलताको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो ।
कार्लाइलको भनाइ छ, 'गर! केही गर! केही सृजना गर चाहे त्यो काम अत्यन्त कम परिणाम ल्याउने नै किन नहोस् । श्रमलाई कहिल्यै तुच्छ र क्षुद्र नमान ।'
- स्वेट मार्डन
प्रेरक संसार: सफलताका लागि मेहेनत